အဲဒီအဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့က မလုပ်ချင်ကြတာ အဲဒီအဆင့်က Dirty Job လို့ ကျွန်တော်က ခေါ်ချင်တာ။ ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ရှာနေရချိန်လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကို လူငယ်တွေက စိတ်မရှည်ကြတာ။ ဥပမာတစ်ခု ပြောပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဘာကိုရွေးရမလဲဆိုတာ အမြဲတိုင်ပတ်လေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာဖြစ်ချင်လဲမေးရင် အတော်များများက Superman ဖြစ်ချင်တယ် Batman ဖြစ်ချင်တယ်။ ချမ်းသာချင်တယ်။ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ အာဏာရှင်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ နောက် သုံး လေး လအတွင်း ဆိုတာကြီးပဲ။ အဲလိုတော့ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ အကြံမပေးတတ်ပေမဲ့ ( နည်းသိမှတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်မှာပေါ့ ) မျှခြေလေးကို စဉ်းစားမိဖို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် -
Need နှင့် Want နဲ့ကို ချိန်ဆရမယ်။
ဥပမာပြောရရင် ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်။ ဘယ်လို ပညာတတ်မျိုးဖြစ်ချင်တာလဲ?
Digital Marketing မှာ ပညာတတ်ချင်တာ။
ဒါက ဖြစ်ချင်တာ Want
အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်မလဲ?
စာဖတ်ဖို့၊ သင်တန်းတက်ဖို့၊ Diploma တန်းတွေတက်ဖို့ အစရှိတာတွေ ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အများကြီးပဲ။
ဒါတွေက လိုအပ်တာ need
ကိုယ်လိုအပ်တာတွေ လိုချင်တာတွေရဖို့ ဘာတွေ လုပ်ဖို့လိုမလဲ?
အဲဒီအဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့က မလုပ်ချင်ကြတာ အဲဒီအဆင့်က Dirty Job လို့ ကျွန်တော်က ခေါ်ချင်တာ။
ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ရှာနေရချိန်လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကို လူငယ်တွေက စိတ်မရှည်ကြတာ။ ဥပမာတစ်ခု ပြောပါမယ်။ ခင်ဗျားက Management သင်တန်းတခုတက်ချင်တယ်။ အိမ်က မယုံဘူး။ ပိုက်ဆံမထုတ်ပေးဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ပိုက်ဆံမရှိဘူး။
အတော်များများကတော့ ငါကဖြစ်ချင်တာပဲ။ အိမ်က မလုပ်ပေးဘူးဆိုတာနဲ့တင် အရွဲ့တိုက်ဘာညာနဲ့ပြီး နေကြတယ်။
တကယ် လုပ်ရမှာက ရှင်းရှင်းလေးပါ။
မလုပ်ပေးတာဆိုရင် သူတို့လိုချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ စီစစ်လိုက်ရှာပါ။( လူတိုင်းမှာ လိုချင်တာရှိပါတယ်)
တစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲ။ အဲဒီတစ်ခုခုကို ဖြစ်အောင်သာလုပ်ပေးလိုက်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်သွားချင်တာကို တောင်းဆို။ ဆယ်တန်းကလေးတွေဆိုလည်း ဂုဏ်ထူးများများရအောင် လုပ်ဖို့လိုလား။ လိုရင်း ရအောင်လုပ်ပေး ပြီးတော့မှ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကိုဖြည့်။
အဲဒါကိုမှ သူတို့ တောင်းဆိုတာက ကိုယ်လည်းမလုပ်နိုင် လုပ်ဖို့လည်း လုံးဝစိတ်မပါရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင် တခြားဟာတစ်ခုလုပ်ပေးပါ့မယ်ကတိပေး။
ဒါမှမဟုတ် အိမ်က လုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်တာ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲ?
ဘာ Dirty Job တွေ လုပ်ဖို့လိုမလဲ? ဘယ်သူ့ဆီက တောင်းဆိုရမလဲ ?
အဲဒါကမှ ပိုပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ တောင်းဆိုမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။